We Fight We Win. -- " More than Media ": ပြည်တွင်း သတင်းများ
Nyo Min Swe and3other friends shared RFA Burmese's photo.
တောင်သူတွေရဲ့ ကြွေးမြီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရဘက်က အတိုးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ နှစ်ရှည်ချေးပေးနိုင်ဖို့ ဥပဒေပြဌာန်း ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အပြင် တခြားအကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့် ဥပဒေပြဌာန်းနိုင်ဖို့အတွက် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ဒီကနေ့က နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ လွတ်လပ်စွာစိုက်ပျိုးပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ခွင့် စတဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြင် တခြားဥပဒေအရ ပြဌာန်းသင့်တဲ့အချက်တွေကို ဆွေးနွေးကြကြောင်း အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားအသင်း ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ စိုးထွန်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ရေးရာကော်မတီဝင်တွေနဲ့ တောင်သူလယ်သမားအသင်း အဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ် ဥက္ကဌ ဦးချစ်ခိုင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားအသင်း တာဝန်ရှိသူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနဲ့ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် ဥက္ကဌ ဦးဝင်းအောင် စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ လယ်သမားအခွင့်အရေး ဥပဒေ မကြာမီ ပြဌာန်းမည် တောင်သူတွေရဲ့ ကြွေးမြီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရဘက်က အတိုးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ နှစ်ရှည်ချေးပေးနိုင်ဖို့ ဥပဒေပြဌာန်း ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အပြင် တခြားအကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့် ဥပဒေပြဌာန်းနိုင်ဖို့အတွက် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ဒီကနေ့က နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ လွတ်လပ်စွာစိုက်ပျိုးပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ခွင့် စတဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြင် တခြားဥပဒေအရ ပြဌာန်းသင့်တဲ့အချက်တွေကို ဆွေးနွေးကြကြောင်း အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားအသင်း ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ စိုးထွန်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ရေးရာကော်မတီဝင်တွေနဲ့ တောင်သူလယ်သမားအသင်း အဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ် ဥက္ကဌ ဦးချစ်ခိုင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားအသင်း တာဝန်ရှိသူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနဲ့ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် ဥက္ကဌ ဦးဝင်းအောင် စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
This fantastic urban garden was made with the help of recycled plastic bottles
မြန်မာ ဘက် မှ တင်သွင်း သည့် ဘတ်ငွေ သန်း ၇၀၀ နီးပါး မူးယစ်
ဆေးဝါး များ ထိုင်းဖမ်းဆီးရမိ
၂၀၁၃ ခုနှစ် ပထမ ၃ လ အတွင်း မြန်မာ နိုင်ငံ ဘက်မှ ထိုင်း နိုင်ငံ တွင်း
သို့တရားမ၀င် တင်သွင်း နေသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ကို ထိုင်း အာဏာပိုင်များ က နိုင်ငံ ၏ မြောက် ဘက် နယ်စပ် အနှံ အပြား ရှိ
စစ်ဆေး ရေး ဂိတ် များ မှ ဖမ်းဆီး ရမိ ခြင်း ကို ယနေ့သတင်းစာရှင်းလင်း
ပွဲ ပြု လုပ် နေစဉ်။
ရက် ၉၀ အတွင်း စိတ်ကြွဆေး ပြား သန်း ၅၀၀ နှင့် အခြား မူးယစ်ဆေး ၀ါး
များ ကို ချင်းရိုင် နှင့် အခြား ခရိုင် များ တွင် ဖမ်းဆီး ရမိသည်။ မူးယစ် မှောင်
ခို ၁၃ ဦး ဖမ်းဆီး ရမိ ပြီး အမျိုး သမီးများ လည်း ပါဝင်သည်။ နှစ်ဦး ကို အသေဖမ်းဆီး ရမိသည် ဘန်ကောက် ပို့ စ် သတင်း တွင် ဖော်ပြထား
ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဆေးပြားများ တွင် ICE ဆေးပြား က ဘတ်ငွေ သန်း ၁၅၀ ဖိုးရှိသည် ဟု ဆိုသည်။
Bangkok Post file photo by Apichart Jinakul)
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရဲ့  တရုတ်လက်ရာ မြေအောက်ပုံစံငယ်...။ နေလဘုရားနားက တန်စောင်းမှာ ရှိတယ်။
တရုတ်ဘုရင်က မြေရှိုး မိုးပျံနိုင်တဲ့ လူစွမ်း'မ'ကောင်း မောင်ကံကို ဓါတ်တော်ခိုးခိုင်းတုန်းက သုံးတဲ့ မြေပုံလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မောင်ကံတစ်ယောက်တော့ ရန်ကုန်မြစ်ရဲ့  ဒီရေအတက်အကျ စွမ်းအင်ကို ယူသုံးထားတဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်ကို မကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရှာပါဘူးတဲ့...။
တရုတ်တွေများ ဟိုးရှေးရှေးကတည်းက မြန်မာပြည်က ဘာများယူရမလဲ အမြဲ စဉ်းစားနေပုံရတယ်။
Soe Oo Kyaw
မန္တလေး မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ညက လူနေအိမ်များရှေ ရပ်နားထားတဲ့ ကားတစီး မှန်တွေကို မူးယစ်နေတဲ့ လူငယ်တစ်စုက ဖျက်ဆီးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း
တကယ်လို့ လူဖြူတွေမှာ အသက် ၂၀မတိုင်မီနဲ့ အာဖရို-အမေရိကန် တွေမှာ ၃၀မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူရင် အရွယ်မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ အလိုလိုဆံ ပင်ဖြူလာခြင်းက အချို့ရှားပါးတဲ့ ရောဂါက လွဲလို့ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗီတာမင် B12 နည်းခြင်းနဲ့ သိုင်းရွိုက်ရောဂါအချို့မှာ အရွယ်မ တိုင်မီ ဆံပင်ဖြူလေ့ရှိပါတယ်။ အချို့ လေ့လာမှုတွေမှာတော့ အရွယ်မတိုင် မီ ဆံပင်ဖြူခြင်းက အရိုးပါးရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဆံပင်ဖြူတာကို ဘယ်လိုကွယ်ဝှက်ကြ မလဲ။ နည်းကတော့ အမျိုးမျိုးပါပဲ။
(၁) ခဏတာခံ အရောင်ဆိုးခြင်း -ယင်းက ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် ခန့်ခံပြီး ယခုမှစတင်ဖြူသူတွေ အတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။
(၂)ဟိုင်းလိုက်ဆိုးခြင်း -ဟိုင်းလိုက်ဆိုး ခြင်းကလည်း သင့်ရဲ့ဆံပင်ဖြူခြင်းကို အာရုံလွှဲပေးနိုင်ပါတယ်။
(၃)တာရှည်ခံအရောင်ဆိုးခြင်း - တကယ်လို့ခေါင်းရဲ့ ၄၅ရာခိုင်နှုန်းက နေ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြူနေရင် တော့ တာရှည်ခံအရောင်ဆိုးသင့်ပါ တယ်။
(၂)ဆံပင်ဆိုးသောပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်၍ ဟိုင်းလိုက်ကို ဝေ့ဗ်ခလေး များဖော်၍ ဆိုးပြီး တိုနာသုံးပါ။
(၄) ဆံပင်ဖြောင့်စေမယ့်စက်များကို သုံးပြီး ဆံပင်ကို ပိုတောက်ပြောင်၊ ချောမွတ်တယ်လို့ထင်ရအောင် ပြင် ထားပါ။ အကြောင်းကတော့ ဆံပင်ဖြူ တွေက ကောက်ကွေးမွဲခြောက်လွယ် လို့ပါပဲ။ ဘ၀မှာ ပျော်ပျော်နေပါ။ အလှအပဆိုတာ ဆံပင်အရောင်ဖြူ တာမဖြူတာနဲ့ မသတ်မှတ်ထားပါဘူး။
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ မဒေးကျွန်းကျေးရွာတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားခြင်း
(17-12-2012 )ရက်နေ့တွင် CNPC တရုတ်ကုမပဏီ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အချက်(၉)ချက်ပါသောတောင်းဆိုချက်များကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။
၁။ သိမ်းဆည်းခံရသော လယ်ယာမြေ၊ဥယျာဉ်ခြံမြေများကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်း ပေးလျော်ရေး
၂။ မဒေးကျွန်းဒေသဆိပ်ကမ်းမှ (ကျောက်တန်း၊ ပြိန်၊ ရွာမ၊ ပန်းထိမ်ဆည်ရွာ) ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ပေးရေး၊
၃။ အလုပ်သမားကဒ် ရရှိပြီးသူဒေသခံများ အလုပ်ရရှိရေး၊ လုပ်အားခကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်းရရှိရေး
၄။ မဒေးကျွန်းရှိလူနေထိုင်အိမ်များနှင့် အဆောက်အဦးများတွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး
၅။ ဒေသခံများလုံခြုံမှုရှိစေရန် လူစိမ်းအလုပ်သမားများကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရေး
၆။ ကျွန်းပတ်လည် ငါးဖမ်းကွက်များတွင် လွတ်လပ်စွာ ငါးဖမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိရေး
၇။ မဒေးကျွန်းပေါ်ရှိ မြေလွတ်မြေရိုင်း မည်သည့်နေရာဒေသကိုမှ ကျွန်းသူကျွန်းသားမသိပဲ သိမ်းယူလုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုရ
၈။ လယ်ယာမြေအသစ်ဖော်ထုတ်ပေးရေးအဖြစ် ကျောက်တန်းကာရီကို အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး
၉။ ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နစ်နာနေသော လယ်ပိုင်ရှင်၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များကို ထိုက်တန်သောလျော်ကြေးပေးရေး
ထိုကဲ့သို့ တောင်းဆိုလျှောက်ထားရာတွင်- ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဖြစ်သော မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတို့မှ ထိုတောင်ဆိုချက်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ကတိပြုသောကြောင့် ထိုနေ့စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်
လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယနေ့အထိ မည်သို့မျှဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသောကြောင့် (29-3-2013)ရက်နေ့တွင် ထပ်မံပြီးငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ကိုလျှောက်ထားရာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမှ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်လိုက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးထံသို့အယူခံဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မဒေးကျွန်းကျေးရွာဒေသခံများထံမှသိရှိရပါသည်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ကျုံမငေး တွင်ပြုလုပ်တဲ့ အမေ ကြီး(ခ) အမေရေယာဉ် နတ်ပူးကာ နတ်နန်းတွင် ကနေကြသူ များကိုတွေ့ ရစဉ်။
တအာင်း (ပလောင်) ညီမငယ်များ
ကျမတို့ပုပ္ပားတောင်ကြီးကမြေတွေကိုတူးယူပြီး ပိုဇိုလန်ထုတ်ယူနေလို့ ချိုင့်ကြီးတွေဖြစ်သွားပုံ တွေပါ၊တောင်တွေကိုဖြို၊ယာတွေကို သိမ်းယူ လျော်ကြေးမပေး၊ ဒေသခံတွေမှာဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်
ယာမြေတွေကိုဒေသခံတွေဆီက ယာမြေလျော်ကြေးမပေး သီးနှံလျော်ကြေး တစ်နှစ်စာသာပေးပြီး လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနကသိမ်းယူခဲ့တ
အစိုးရ၀န်ထမ်း လစာနှုန်း၊ ပင်စင်စားနဲ့ လုပ်ခများ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီ (ဧပြီ ၁)
ဘာသာရေး ဆရာကြီး များရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်
မိထီလာ မီးမလောင်ခံ ပုံနှင့် မီးလောင်ပြီး ပုံ
မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို အသေးစိတ် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီး ကျူးလွန်သူတွေကို အရေးယူအပြစ်ပေးဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့အခြေစိုက် HRW လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကြီးက ဒီကနေ့မှာ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
HRW အဖွဲ့ရဲ့ ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုချက်မှာ ဂြိုလ်တုကနေ ရိုက်ယူထားတဲ့ မိတ္ထီလာမြို့ပျက်စီးမှု ဓာတ်ပုံတွေကိုပါ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ မိတ္ထီလာမြို့မှာ လူနေအိမ် ၈၅၀ နီးပါးအပြင် တခြားအဆောက်အဦး ၄၀ နီးပါးခန့်လည်း ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဓိကရုဏ်းတွေမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က တားဆီးကာကွယ်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တာကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်သင့်သလို ရခိုင်ပြည်နယ်က အဖြစ်အပျက်တွေ သင်ခန်းစာယူပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ပြည်သူ့အသက်အိုးအိမ်ကာကွယ်ဖို့၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ တားဆီးနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရည်သွေး မြှင့်တင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ အာရှရေးရာ ဒါရိုက်တာ Brad Adams ကို ကိုးကားပြီး ဒီကနေ့ HRW ရဲ့ ကြေငြာချက်မှာ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
မကြာသေးမှီကလေးကမှ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မိတ္ထီလာမြို့နယ်အတွင်း အဓိကရုဏ်းများနှင့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး လက်အောက်ခံ မြို့နယ် တော်တော်များမှာ အဓိကရုဏ်းများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားလာတာမို့ ရှေ့တန်းမှ ပြန်လည် ရောက်ရှိနေပြီး စုဖွဲ့ အနားယူနေတဲ့ တပ်မများကို ကက (ကြည်း) မှ အရေးပေါ် ဆွဲထုတ် သုံးနေရပါတယ်။ စစ်ရုံးနဲ့ နီးစပ်သူများထံမှ တပ်မ အရွေ့အပြောင်း သတင်း သိရှိရသည်မှာ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ရွှေကျင် ကျောက်ကြီး စစ်ဆင်ရေးဒေသ ဧရိယာအတွင်းမှ တပ်မ (၇၇) က တပ်မ (၂၂) နှင့် ရှေ့တန်း တာဝန်ချိန်းပြီး ပဲခူးသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီမှာ မိတ္ထီလာ မြို့နယ် အတွင်း လုံခြုံရေး ယူထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ရင်း (၂) ရင်း အင်အားနှင့် မထိန်းနိုင်လို့ တပ်မ (၇၇) မှ (၃) ရင်း တစ်ဗျူဟာ မိတ္ထီလာမြို့သို့ အရေးပေါ် ထွက်ခွာခဲ့ရသလို မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ တော်လှန်ရေးနေ့ (တပ်မတော်နေ့) မှာ အပြင်စည်းလုံခြုံရေး အဖြစ် တပ်မ (၇၇) မှ (၃) ရင်း တစ်ဗျူဟာ ဝင်ပေးရပြန်ပါတယ်။ တဖန် နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် စကခ (၆) တပ်မကို မိတ္ထီလာမြို့သို့ ဆက်သွင်းပြီး အနားယူရန် ရှိနေတဲ့ တပ်မ (၇၇) မှ တစ်ဗျူဟာနှင့် နေပြည်တော် လုံခြုံရေး ယူနေတဲ့ တစ်ဗျူဟာ တို့ကို ပြန်လည် ဆွဲထုတ်သွားတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး အနောက်ခြမ်း ဧရိယာ မြို့နယ်များအတွင်း အဓိကရုဏ်းများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားလာလို့ အနားယူနေတဲ့ တပ်မ (၆၆) နှင့် စကခ (၄) တို့မှ တပ်ရင်းများဟာ လုံခြုံရေး တာဝန်ကို နယ်မြေအပေါ်အောက် ဆက်စပ် ဝင်ခဲ့ရသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စကခ (၄) ဟာ ကရင်ပြည်နယ် သံတောင် ဧရိယာအတွင်း နွေရာသီ ရိက္ခာစုပုံ အစီအစဉ်အရ ရိက္ခာပို့ ခဲ့ရကာ တဖန် ရန်ကုန် - မန္တလေး ရထားလမ်း လုံခြုံရေး ဝင်ရောက် ပေးရပြီးမှ ပြန်လည် အနားယူ ခဲ့ရတဲ့ တပ်မ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စကခ (၄) ဟာ အနားယူရန် ကြံကာရှိသေး ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး အနောက်ခြမ်း လုံခြုံရေး ထပ်မံ ဝင်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ တပ်မများမှ တပ်မတော်သား အများစုက စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ရင်ဖွင့်လာပါတယ်။
မိတ္ထီလာမြို့အတွင်း ဝင်ရောက် လုံခြုံရေး ယူမဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် စစ်ယာဉ်တန်း
သူတို့တွေ မိုးရာသီမှာ ဘယ်လိုနေကြမလဲ ? ကျွန်တော်သိသလောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အရမ်းကိုယဉ်ကျေးတဲ့ဘာသာလို့ ကြားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ် ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ တကယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဟုတ်ရဲ့လား သိုတည်းမဟုတ် ဒီလူမျိုးတွေဟာ ဘာသာမဲ့တဲ့လူမျိုး ၊
What the hell are you talking about Rakhine? Do you know about that Kalar? Throw them to Bingalar...